Xvid Splitter: Sida loo jar Xvid Files
> Resource > Video > Xvid magaabay: Sida loo jar Xvid Files
Tani waa tutorial ah tallaabo-tallaabo inaan idin ​​baro guys sida loo gooyay files Xvid la magaabay ah mid aad u fudud in la isticmaalo oo la taaban karo Xvid. Iyo geeddi-socodka oo dhan waa kaliya tallaabooyin yar oo sahlan. Iyada oo ay taasi splitter XviD smart wadaago here- Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Video Editor u Mac ), waxaad jari karaa qayb kasta oo aadan rabin, ama laga gooyay file Xvid in dhererka gaarka ah si fudud oo dhaqso, ama laga gooyay Xvid weyn fayl dhowr files yar-size.
Marka hore, soo baxdo iyo rakibi app this ka dibna raaci tutorial hoos ku qoran talaabo talaabo ah. Ogsoonow in ay ku salaysan madal Window. Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan tag kale tutorial tallaabo-tallaabo: hage dadka isticmaala Mac ' .
1 dar files Xvid in this splitter Xvid
Ku dar file Xvid aad rabto galay album this app ee. Waxaad si fudud oo si deg deg ah ayaa sidaas samayn kara garaacida ah "Import" doorasho ku menu ugu weyn ee interface ka, ka dibna adakaanayso si doonayay faylasha aad Xvid in ay soo dhoofsadaan. Ama toos ah la furo gal meesha faylasha aad ku kaydsan yihiin kombiyuutarka, markaas si toos ah iyaga jiidayeen galay album this app ee.
2 files Goo Xvid
Jiid faylka si Timeline ka dibna kala file Xvid ah mar kasta oo aad rabto. Si aad u sameyso, waxaad jiidi karaan sare ee Tusiyaha cas Time si ay u dhigay mid ka mid ah jagooyinka aad rabto, ka dibna riix badhanka maqas ah. Hadda, aad kala jabeen video Xvid ah laba qaybood. Ka dib markii aad file Xvid u kala qaybiyey oo dhan ee clips aad doonaysey, waxaad tirtiri kartaa adiga oo aan la rabin clips ka dibna dajiyaan kuwa nasashadayda gelin file hal. Sidaas, waxaad jari karaa qaybaha ku aadan rabin, ama laga gooyay file Xvid in dhererka aad dhab ahaan doonayaan.
Haddii aad rabto in aad ka gooyay file a Xvid weyn dhowr files, waxaad u baahan tahay badbaadin mashruuca oo dhan u gurmad ujeeddada marka aad salaadda dhamaysatona dhamaan shaqooyinka qaybsama. Markaas, dajiyaan mashruuca badbaadiyey mar kale iyo mar kale in ay tirtirto wixii clips kale oo kaliya dhoofiyaan mid clip kaliya mar kasta.
3 dhoofinta ee clips Xvid nasashadayda gelin file cusub
Riix badhanka "Abuur" ka dibna dooro habka wax soo saarka ah ee suuqa kala dhisayaa-up si ay u dhoofiyaan file cusub. Haddii aad doonaysid in aad sii faylka qaab Xvid, kaliya ay tagaan Qaabka> AVI ka dibna riix "Advanced goobaha" doorasho ka hooseeya in ay doortaan Xvid sida ay encoder (Fiiro gaar ah: Sida caadiga ah file Xvid waa file ah qaab AVI la Xvid codec) .